Indlela ukushintshanisa isithombe Affinity Photo noma Umklami amasiko degrees? | Bonisa Top
Khetha ithuluzi hambisa
Khetha isendlalelo ukuze ajikelezwe lwezendlalelo iphaneli.
Qinisekisa ukuthi ungqimba ayikhiyiwe (kwesokudla chofoza ungqimba -> qinisekisa 'Lock’ kuyinto akuhloliwe).
Esikhathini uguqule iphaneli, uzobona isikwele nge tikwele letincane ayisishiyagalolunye.
Khetha okukodwa izikwele. Nanti iphuzu isikhungo, lapho kuphenduka zizokwenziwa. Isikwele isikhungo ungumuntu evamile.
Hlela ukubaluleka Ukuzungelezisa in the Guqula iphaneli. Lokhu libhaliwe R: . A omuhle ukubaluleka imiphumela Ukujikeleza ngokwewashi, futhi ongathandeki Inani Imiphumela i Ukujikeleza anti clockwise.